ဖလားလုပှဲ တှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ပှဲတှမှောဆိုရငျ ဆိုလျရှားကိုမထေ့ားလိုကျပါ… – Premier League Special
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဖလားလကျမဲ့ဖွဈနခေဲ့ရာကနေ အဆုံးသတျနိုငျမယျ့ ပွိုငျပှဲတဈခုဆီကနေ လကျတဈကမျးအလိုမှာ လှညျ့ပွနျခဲ့ရပါပွီ။ ဆိုလျရှားအတှကျတော့ ယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွဘဝမှာ (၄)ကွိမျမွောကျ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့မှုလညျးဖွဈပါတယျ။ မနျစီးတီးအသငျးကတော့ ကာရာဘောငျးဖလားဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို (ဝ-၂) နဲ့ အနိုငျရယူသှားခဲ့ပွီး ဗိုလျလုပှဲကိုတကျရောကျသှားခဲ့ပါပွီ။
ယူနိုကျတကျဟာ ဆိုးလျရှားရောကျလာပွီး နောကျပိုငျး အခြိနျတှကေို ကွညျ့ရငျ ရလဒျတှေ၊ နိုငျပှဲရာခိုငျနူနျးတှအေရ ဆိုးရှားတဲ့အနအေထားတဈခုမှာမရှိခဲ့ပမေယျ့ အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ အရေးကွီးတဲ့ ပှဲတှမှောဆိုရငျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးသှားတတျတာဟာလညျး ဆိုးလျရှား ဖွရှေငျးရတော့မယျ့ အဓိကပွဿနာတဈခုဖွဈလာပါပွီ။
မနှဈက ဆီမီးဖိုငျနယျ (၃)ပှဲမှာ ပရီမီးယားလိဂျမှာတှတေို့ငျး နိုငျနကွေ ခယျြဆီးအသငျးကိုလညျး အကျဖျအဖေလား ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့သလို မနျစီးတီးအသငျးကိုလညျး ဆီမီးအဆငျ့မှာ ရှုံးနိမျ့ပွီးထှကျခဲ့ရပါတယျ။ ယူရိုပါလိဂျမှာလညျး ဆီဗီလာအသငျးနဲ့ တှဆေုံခြိနျမှာ လကျစှမျးကနြတေဲ့ ဒီဂီယာကို ရိုမဲရို အစားဝငျရောကျကစားစခေဲ့ပွီး မရူံးသငျ့ဘဲ ရူံးခဲ့ရတာကွောငျ့ ဗိုလျလုပှဲနဲ့ ဝေးကှာခဲ့ရပွနျပါတယျ။
ဒီနှဈမှာလညျး ခနျြပီယံလိဂျမှာ နောကျတဈဆငျ့တကျနိုငျဖို့ (၁)မှတျသာလိုအပျနခြေိနျမှာ အမှတျရအောငျမယူသှားနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပွိုငျပှဲကနထှေကျခဲ့ရပွနျပါတယျ။
ဒီနမေ့နျစီးတီးအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာလညျး ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဘိုငျလီနရောမှာ ဒဏျရာကသကျသာလာတဲ့ လငျဒီလော့ကို ထညျ့သှငျးကစားစခေဲ့ပွနျပါတယျ။ ဆိုလျရှားရဲ့ လူစားရငျးပှဲထုတျပုံဟာ အရေးကွီးတဲ့ပှဲတှအေပျေါမှာ စိုးရိမျစိတျလှနျကဲမှုတဈခုလို့ယူဆလို့ရပါတယျ။ ဆိုးလျရှားလကျထကျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျ ကနျသမြှပှဲတှေ ရူံးနိမျ့ နတောက ကံဆိုးမှုသကျသကျလား…?
ဆိုးလျရှားဟာ မိုဒီမှာနညျးပွကတညျးက နျောဝေ ဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျ (၂) ကွိမျမှာ (၂) ကွိမျစလုံး ရူံးနိမျ့ခဲ့ဖူးပါတယျ။ စပါးအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟိုဟာ ဒီလိုနိုငျသငျ့တဲ့ပှဲတှကေိုဆိုရငျ နိုငျပှဲရအောငျ ကစားသမားတှဆေီက အစှမျးအစတှကေို ညှဈထုတျနိုငျစှမျးရှိတဲ့သူတဈယောကျပါ။ အသငျးတဈသငျးအနနေဲ့ ဒီရာသီမှာ ပုံမှနျခွစှေမျးတှတေညျငွိမျနဖေို့ အတျောကိုကွိုးစားနရေပမေယျ့ နိုငျဖို့လိုအပျတဲ့ပှဲတှမှော နိုငျပှဲရယူဖို့မလှယျကူရငျ အသငျးအနနေဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးတှေ နညျးစနဈပိုငျးတှထေကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာ ပွဿနာတဈခုခုရှိလာနပေါပွီ။
အခုပှဲမှာ နှဈသငျးစလုံးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တှဆေုံ့တုနျးကထကျတော့ ကစားပုံပိုမိုပွငျးထနျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲအစ (၂)မိနဈမှာ ဂြှနျစတုနျးနဲ့ထိပွီးဂိုးဝငျသှားခဲ့ပမေယျ့ ရကျဖိုဒျ လူကြှံနခေဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ဦးဆောငျဂိုးရမယျ့အခှငျ့အရေး နဈနာခဲ့ရသလို ပှဲခြိနျ (၅)မိနဈမှာ မနျစီးတီးအသငျးက ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဂနျဒိုဂနျလူကြှံနခေဲ့လို့ လူကြှံဘောအဖွဈသာသတျမှတျခဲ့ပါတယျ။
ပှဲခြိနျ (၂၃)မိနဈမှာ ဘယျတောငျပံကနဆှေဲယူပွီး ဖိုဒငျသှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးဟာလညျးလူကြှံဘောဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပထမပိုငျးမှာ နှဈသငျးပေါငျး သုံးဂိုး (မနျယူ ၁ ဂိုး၊ မနျစီးတီး ၂ ဂိုး) ထိ ရခဲ့ပမေယျ့ သုံးဂိုးလုံးဟာ လူကြှံဘောတှဖွေဈနခေဲ့တာကွောငျ့သာ ပထမပိုငျးမှာတငျ သှငျးဂိုးမြားသှားနိုငျတဲ့ ပှဲတဈပှဲမဖွဈခဲ့တာပါ။
ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ မနျစီးတီး အသငျးဟာ သှငျးဂိုး နှဈဂိုးရယူသှားနိုငျခဲ့ပွီး နှဈဂိုးစလုံးဟာ Set-piece တှကေနတေဈဆငျ့ ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပှဲခြိနျ မိနဈ (၅၀) မှာ ဖိုဒနျရဲ့ ပွဈဒဏျဘောကနျခကျြကနေ ပေးပို့လိုကျတဲ့ ဘောလုံးကို ဂြှနျစတုနျးဈ ပိတျသှငျးယူခဲ့သလို
ဒုတိယဂိုးကိုလညျး (၈၃) မိနဈမှာ ထောငျ့ကနျဘောကနေ ဝမျဘဈဆာကာ ခေါငျးတိုကျရှငျးထုတျလိုကျရာက ထှကျလာတဲ့ ဘောလုံးကို ဖာနနျဒငျဟိုက ဂိုးဧရိယာထိပျကနေ ကနျသှငျးသှားခဲ့တာပါ။
ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ မနျစီးတီးအသငျးတို့ ရဲ့ ပှဲမှာ အသငျးနှဈသငျးစလုံးရဲ့ ခွစှေမျးတှဟော အထူးအထှအေပွဈပွောစရာနဲပမေယျ့ ဘရူနိုရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတှကေတော့ ဒီနပှေဲ့မှာ အားရစရာမကောငျးခဲ့ပါဘူး။ ဒီနိုငျပှဲဟာ ခွစှေမျးပိုသာတဲ့အသငျးအနိုငျရသှားခဲ့တဲ့ပှဲတဈပှဲပါပဲ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဒီရှုံးပှဲကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲမှာ ကောငျးမှနျနတေဲ့ အခွအေနကေို မထိခိုကျစဖေို့လိုအပျပါတယျ။ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ အဆုံးအဖွတျပှဲတှေ မှာရလဒျမကောငျးခြိနျမှာ အမှတျပေးပွိုငျပှဲကိုသာ သခြော ကစားခဲ့လာမယျဆိုရငျ ဒီရာသီဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ဖလားတဈလုံးတော့ မြှျောလငျ့လို့ရနိုငျပါတယျ။
ဖလားလုပှဲ တှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ပှဲတှမှောတော့ ဆိုလျရှားကိုမထေ့ားလိုကျပွီး မြှျောလငျ့ခကျြမထားတာ ယူနိုကျတကျပရိသတျတှအေတှကျ ပိုမိုသငျ့တျောပါလိမျ့မယျ။
ဖလားလုပွဲ တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင် ဆိုလ်ရှားကိုမေ့ထားလိုက်ပါ…
ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရာကနေ အဆုံးသတ်နိုင်မယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆီကနေ လက်တစ်ကမ်းအလိုမှာ လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါပြီ။ ဆိုလ်ရှားအတွက်တော့ ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြဘဝမှာ (၄)ကြိမ်မြောက် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ ကာရာဘောင်းဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို (၀-၂) နဲ့ အနိုင်ရယူသွားခဲ့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ ယူနိုက်တက်ဟာ ဆိုးလ်ရှားရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်း အချိန်တွေကို ကြည့်ရင် ရလဒ်တွေ၊ နိုင်ပွဲရာခိုင်နူန်းတွေအရ ဆိုးရွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမရှိခဲ့ပေမယ့် အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ပွဲတွေမှာဆိုရင် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးသွားတတ်တာဟာလည်း ဆိုးလ်ရှား ဖြေရှင်းရတော့မယ့် အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ မနှစ်က ဆီမီးဖိုင်နယ် (၃)ပွဲမှာ ပရီမီးယားလိဂ်မှာတွေ့တိုင်း နိုင်နေကြ ချယ်ဆီးအသင်းကိုလည်း အက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သလို မန်စီးတီးအသင်းကိုလည်း ဆီမီးအဆင့်မှာ ရှုံးနိမ့်ပြီးထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ယူရိုပါလိဂ်မှာလည်း ဆီဗီလာအသင်းနဲ့ တွေဆုံချိန်မှာ လက်စွမ်းကျနေတဲ့ ဒီဂီယာကို ရိုမဲရို အစားဝင်ရောက်ကစားစေခဲ့ပြီး မရူံးသင့်ဘဲ ရူံးခဲ့ရတာကြောင့် ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာလည်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့ (၁)မှတ်သာလိုအပ်နေချိန်မှာ အမှတ်ရအောင်မယူသွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဘိုင်လီနေရာမှာ ဒဏ်ရာကသက်သာလာတဲ့ လင်ဒီလော့ကို ထည့်သွင်းကစားစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဆိုလ်ရှားရဲ့ လူစားရင်းပွဲထုတ်ပုံဟာ အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေအပေါ်မှာ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲမှုတစ်ခုလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် ကန်သမျှပွဲတွေ ရူံးနိမ့် နေတာက ကံဆိုးမှုသက်သက်လား…?
ဆိုးလ်ရှားဟာ မိုဒီမှာနည်းပြကတည်းက နော်ဝေ ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် (၂) ကြိမ်မှာ (၂) ကြိမ်စလုံး ရူံးနိမ့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ စပါးအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟိုဟာ ဒီလိုနိုင်သင့်တဲ့ပွဲတွေကိုဆိုရင် နိုင်ပွဲရအောင် ကစားသမားတွေဆီက အစွမ်းအစတွေကို ညှစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ ဒီရာသီမှာ ပုံမှန်ခြေစွမ်းတွေတည်ငြိမ်နေဖို့ အတော်ကိုကြိုးစားနေရပေမယ့် နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပွဲတွေမှာ နိုင်ပွဲရယူဖို့မလွယ်ကူရင် အသင်းအနေနဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းတွေ နည်းစနစ်ပိုင်းတွေထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာနေပါပြီ။
အခုပွဲမှာ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တွေ့ဆုံတုန်းကထက်တော့ ကစားပုံပိုမိုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအစ (၂)မိနစ်မှာ ဂျွန်စတုန်းနဲ့ထိပြီးဂိုးဝင်သွားခဲ့ပေမယ့် ရက်ဖိုဒ် လူကျွံနေခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ဦးဆောင်ဂိုးရမယ့်အခွင့်အရေး နစ်နာခဲ့ရသလို ပွဲချိန် (၅)မိနစ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဂန်ဒိုဂန်လူကျွံနေခဲ့လို့ လူကျွံဘောအဖြစ်သာသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၂၃)မိနစ်မှာ ဘယ်တောင်ပံကနေဆွဲယူပြီး ဖိုဒင်သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးဟာလည်းလူကျွံဘောဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမပိုင်းမှာ နှစ်သင်းပေါင်း သုံးဂိုး (မန်ယူ ၁ ဂိုး၊ မန်စီးတီး ၂ ဂိုး) ထိ ရခဲ့ပေမယ့် သုံးဂိုးလုံးဟာ လူကျွံဘောတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်သာ ပထမပိုင်းမှာတင် သွင်းဂိုးများသွားနိုင်တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲမဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ မန်စီးတီး အသင်းဟာ သွင်းဂိုး နှစ်ဂိုးရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ဂိုးစလုံးဟာ Set-piece တွေကနေတစ်ဆင့် ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲချိန် မိနစ် (၅၀) မှာ ဖိုဒန်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ချက်ကနေ ပေးပို့လိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို ဂျွန်စတုန်းစ် ပိတ်သွင်းယူခဲ့သလို ဒုတိယဂိုးကိုလည်း (၈၃) မိနစ်မှာ ထောင့်ကန်ဘောကနေ ဝမ်ဘစ်ဆာကာ ခေါင်းတိုက်ရှင်းထုတ်လိုက်ရာက ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ဖာနန်ဒင်ဟိုက ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေ ကန်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ ရဲ့ ပွဲမှာ အသင်းနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ခြေစွမ်းတွေဟာ အထူးအထွေအပြစ်ပြောစရာနဲပေမယ့် ဘရူနိုရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကတော့ ဒီနေ့ပွဲမှာ အားရစရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒီနိုင်ပွဲဟာ ခြေစွမ်းပိုသာတဲ့အသင်းအနိုင်ရသွားခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပဲ။
ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီရှုံးပွဲကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကောင်းမွန်နေတဲ့ အခြေအနေကို မထိခိုက်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပွဲတွေ မှာရလဒ်မကောင်းချိန်မှာ အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲကိုသာ သေချာ ကစားခဲ့လာမယ်ဆိုရင် ဒီရာသီဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ဖလားတစ်လုံးတော့ မျှော်လင့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဖလားလုပွဲ တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ ဆိုလ်ရှားကိုမေ့ထားလိုက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်မထားတာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။